Mozilla, Google, Apple na Microsoft jikọtara ọnụ iji dozie mgbakwunye | Site na Linux
Ọchịchịrị | 10/06/2021 18:04 | Noticias
W3C mara ọkwa Febọchị ole na ole gara aga nguzobe otu obodo a na akpo "WebExtensions" (WECG) onye isi oru ya bum na ndị ọrụ nchọgharị na-arụkọ ọrụ na ndị ọzọ nwere mmasị iji kwalite ngwa mgbakwunye mmepe ngwa mgbakwunye Common nchọgharị dabere na WebExtensions API.
Ndị ọrụ a gụnyere ndị nnọchi anya Google, Mozilla, Apple na Microsoft yana nkọwa nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ nzube iji kwado ihe e kere eke nke plugins na-arụ ọrụ dị iche iche na ihe nchọgharị.
W3C kwuru na ọ na-ezube imezu ebumnuche a site na ịkọwapụta otu ụdị zuru oke yana arụmọrụ nwere isi, API na usoro ikike, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na ndị na-arụ ọrụ ga-akọwapụta ihe mgbakwunye iji meziwanye arụmọrụ, wusi nchekwa ma nye nchebe megide mmegbu.
Mgbe ị na-emepe nkọwa, a na-atụ aro ka ị gbasoo ụkpụrụ nke W3C TAG (Nka na ụzụ otu), dị ka onye ọrụ na-elekwasị anya, mmekọrịta, nchekwa, nzuzo, ọrụ, ịdị mfe nke ndozi, na omume amụma.
La WECG webụsaịtị kwuru na ebumnuche otu a bụ ịkọwapụta otu isi API, ụdị, na ikikere maka mgbakwunye ihe nchọgharị weebụ, na-ekwupụta:
Site na ịkọwapụta API, arụmọrụ, na ikikere WebExtensions, anyị nwere ike ịme ka ọ dịkwuo mfe maka ndị mmepe ndọtị iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ njedebe, ma na-akwaga ha na API ndị na-eme ka arụmọrụ ka mma na igbochi mmegbu.
Ruo ugbu a otu ahụ emepụtala ụlọ ọrụ GitHub raara onwe ya nye ma tinye ọnụ a obodo iwu na njikere maka ọrụ dị n'aka nke akọwapụtara dịka:
N'iji usoro ndọtị dị na API ndị Chrome, Microsoft Edge, Firefox na Safari na-akwado dị ka ntọala, anyị ga-amalite ịrụ ọrụ na nkọwapụta. Ebumnuche anyị bụ ịchọpụta ihe jikọrọ ọnụ, weta mmejuputa ọnụ, ma depụta usoro maka mmepe n'ọdịnihu.
Ngwa mmepe API na ụdị ejirila na Chrome, Microsoft Edge, Firefox, na Safari ga-abụ ihe ndabere maka ụdịdị emere. Workingtù ahụ na-arụ ọrụ ga-anwa ịchọpụta njirimara niile maka ihe nchọgharị niile maka ịmepụta plugins, weta mmejuputa ọnụ, na ịkọwapụta ụzọ nke mmepe ga-ekwe omume.
N’akwụkwọ ọrụ ha kwuru, ha kwuru ụkpụrụ a:
Onye ọrụ: ihe nchọgharị na-enye ndị ọrụ ohere ịhazi ahụmịhe nchọgharị weebụ ha dabere na mmasị ha na mkpa ha.
Ndakọrịta: jigide ma melite ndakọrịta na ndọtị ndị dị na ndọtị API ndị ewu ewu. Nke a ga - enyere ndị mmepe aka ighazigharị ndọtị ha ka ha rụọ ọrụ na ihe nchọgharị dị iche iche, nke nwere ike bụrụ njehie.
Ọrụ: hapụ ndị mmepe ka ha dee ndọtị na-enweghị mmetụta na-adịghị mma na arụmọrụ ma ọ bụ ike oriri nke ibe weebụ ma ọ bụ ihe nchọgharị ahụ.
Nchebe: Mgbe ị na-ahọrọ mgbakwunye ndị ị ga-eji, ndị ọrụ ekwesịghị imebi ọrụ na nchekwa. Site na ndọtị API ọhụrụ, a ga-agbanwe mgbanwe na ụdị ahụ.
Nzuzo: N'otu aka ahụ, ndị ọrụ ekwesịghị imebi ọrụ na nzuzo. Ebe ọ bụ na ihe bụ isi ga-abụ na mgbakwunye ihe nchọgharị ahụ na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ rụọ ọrụ ka ọ na-achọ ohere kachasị mkpa maka data nchọgharị onye ọrụ iji belata ma ọ bụ kpochapụ azụmaahịa ndị ọrụ njedebe ga-eme n'etiti arụmọrụ na nzuzo.
Mbugharị: Ọ kwesịrị ịdị mfe maka ndị mmepe ịnyefe ndọtị site na otu ihe nchọgharị gaa na nke ọzọ, yana maka ihe nchọgharị iji kwado ndọtị na ọtụtụ ngwaọrụ na sistemụ arụmọrụ.
Ndinọgide: Site na ime ka API dị mfe, nke a kwesịrị ikwe ka ndị mmepe sara mbara mepụta ndọtị ma mee ka ọ dịrị ha mfe ịkwado ndọtị ha mepụtara.
Okpomoku: ndị na-ahụ maka ihe nchọgharị kwesịrị ịnye ọrụ na ihe nchọgharị gị nke ọma ma nwekwaa ohere ịnwale iji njirimara ọhụrụ.
W3C kwuru n'ụzọ doro anya na ezubere ya ịkọwa kpọmkwem ihe ndị mmepe nwere ike na enweghị ike ịmepụta na ndọtị. Ha agaghị ezipụta, ịhazi ma ọ bụ ịhazi gburugburu ịbanye ma ọ bụ nnyefe nke ndọtị. Naanị ha chọrọ ịgba ume ọhụrụ ma na-echekwa nzuzo na nchekwa onye ọrụ n'ụzọ dị otu n'ofe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Mozilla, Google, Apple na Microsoft jikọtara ọnụ iji dozie mgbakwunye
na mpempe: nnukwu-ọnụ ọgụgụ nanị
Nvidia na Valve wetara DLSS, teknụzụ na-enye ndị egwuregwu ohere ịrụ ọrụ karịa na Linux